Wednesday January 29, 2020 - 12:02:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha Cunsuriga ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay waxa loogu yeero Heshiiska qarniga oo ah mid Shacabka Falasdiiniyiinta gummeysi cusub gelinaya islamarkaana Yahuudda u sharciyaynaya dhulka ay xoogga ku haysato.
Trump ayaa aqalka cad ee magaalada Washington ka iclaamiyay hindisaha Safqatul Qarni ama heshiiska qarniga waana qorshe lagu doonayo in Yahuudda lagu siiyo inta ka harsan dhulalka Falsdiin.
Khariirad ama Map uu Trump ku faafiyay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in lagu fidin doono awoodda dowladda Yahuudda deegaanno hor leh, Map-ka ayaa muujinaya in inta badan dhulka daanta galbeed loo gacan geliyay Yahuudda ayna meesha ka baxayaan degmooyin iyo tuulooyin u dhaxeeya Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza.
Sida ku cad Khariiradda Trump magaalada Qudus waxay sii ahaan doontaa caasimadda Yahuudda iyadoona shacabka Falasdiin ay marti ka noqon doonaan Qudus iyo dhulal badan oo ku xeeran.
R/Wasaaraha Yahuudda oo ku sugnaa madashii uu Trump ku iclaaminayay heshiiska Safqatul Qarni ee sheydaaniga ah ayaa dhoolla caddeyn iyo bogaadin ujeedinayay dowladda Mareykanka.
Heshiiska Safqatul Qarni oo ah hindise ladoonayo in lagu burburiyo qadiyadda Falasdiin wuxuu soo bilaawday sanaddii 2017 kolkaas oo Trump uu booqday wadanka Sacuudiga waxaana qorshahan dhagarta ah gadaal ka taagan Hoggaamiyaal Carbeed oo ay kamid yihiin Max'med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga, Bin Zaayad dhaxal sugaha Imaaraatka Carabta iyo Cabdi Fataax Alsiisi madaxweynaha Masar.